Nosy Cayman: Fanavaozana ny fizahan-tany ofisialy COVID-19
Home » Toerana fitsangatsanganana » Nosy Cayman: Fanavaozana ny fizahan-tany ofisialy COVID-19
Miaraka amin'ny fanalefahana tsimoramora ireo lalàna ankehitriny, ny governemanta dia mamboatra antsipiriany momba ny dingana voalohany, ary manohy ny fanandramana mafy mba hahazoana antoka fa hisokatra indray araka ny kasaina hatao.
Ao amin'ny Covid-19 valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany talata 28 aprily 2020, taorian'ny vavaka nataon'i Pasteur Dave Tayman, dia nanamarika ireo mpitarika ny sehatra ho an'ny daholobe fa na dia voan'ny virus aza dia miatrika fanarenana ara-toekarena lava sy maharitra ny Nosy Cayman.
Nambara ihany koa fa olona 742 no efa niainga avy amin'ny Nosy Cayman, na hiainga amin'ity herinandro ity amin'ny sidina voatondro ho any UK, Miami, Canada ary Cancun, Mexico.
Ankoatr'izay, 198 ny Caymanians sy ny mponina maharitra efa niverina tany amin'ny Nosy Cayman tamin'ny sidina hatreto.
Lehiben'ny mpitsabo Dr. John Lee nitatitra:
Ireo orinasam-panjakana tsy miankina izay mampiasa mpiasan'ny laharam-pahamehana dia hahazo mailaka avy amin'ny departemantan'ny varotra sy ny fotodrafitrasa momba ny fitiliana ny mpiasa ao aminy.
Tranga tsara telo tamin'ny valin'ny fitsapana 187 no naseho. Ny iray amin'izy ireo dia manana tantaram-pitaterana, ny iray dia nifandray tamina tranga tsara teo aloha ary ny iray kosa dia heverina fa amin'ny alàlan'ny fifandraisana eo an-toerana.
Amin'ireo lafy tsara telo ireo, ny iray dia mpiasan'ny fahasalamana ao amin'ny HSA, toerana anaovan'ny mpikarakara marary sy mpitsabo fikojakojana ny fampiasana ny protokol PPE ilaina rehetra. Izay nalefa nody mba ho sitrana aorian'ny fanandramana tsara dia arahi-maso isan'andro sy eo ambany fanaraha-maso henjana. Nasaina niantso ny olona 911 mialoha ny rehetra raha toa ka mahatsapa ho ratsy kokoa na miahiahy momba ny toe-pahasalamany izy ireo.
Ny fikarakarana sy ny fanaraha-maso dia natao ho an'ny tranga tsirairay.
Ny mpiasan'ny fahasalamana, Dr. Samuel Williams-Rodriguez dia nilaza hoe:
Ny HSA dia manohy manome fikarakarana maika sy maika ary ankehitriny koa dia mihevitra ny hanome fikarakarana tsara.
Ny fampiasana PPE dia narahina tamim-pahazotoana nandritra ny herinandro maromaro tao amin'ny HSA izao.
Ny praiminisitra Hon. Alden McLaughlin nanao hoe:
Ny valiny tsara ankehitriny dia manasongadina fa ny Nosy Cayman dia mbola tsy afaka mihevitra ny tenany ho avy any anaty ala, na dia mandeha amin'ny làlana tsara aza izy io. Ny herinandro vitsivitsy manaraka dia hanakiana.
Miaraka amin'ity fironana ity, ny governemanta dia mikasa ny hanamaivanana ny famerana amin'ny dingana manomboka amin'ny Alatsinainy 4 Mey. Na dia tsara aza ny isan'ny Cayman Islands amin'ny isan'ny fitsapana natao, dia mbola tsy ampy ny manao fanambarana an-tsokosoko momba ny fihanaky ny viriosy eo amin'ny fiarahamonina. Noho izany dia tokony hotehirizina tsara ny kaonty voatondro ao anatin'izany ny fanalavirana ara-batana, fanasana tanana matetika ary fitsipi-pifehezana.
Ny olana amin'ny fidirana amin'ny telefaona an'i WORC 945-9672 dia alefa mba hiantohana fa voaverina ny laharana voalohany indrindra. Raha tsy afa-mivoaka amin'ity laharana ity ny olona dia tokony handefa hafatra na WhatsApp WORC amin'ny 925-7199 ho fanampiana ny mpanjifa. Ity isa ity dia ho an'ny hafatra ihany.
Ny lalàna nolaniana tamin'ny mpanao lalàna tamin'ny herinandro lasa teo - ny National Pensions, ny fadin-tseranana sy ny fifehezana ny sisin-tany, ny asa, ny fifindra-monina (Tetezamita) ary ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana - dia neken'ny Governora avokoa ary ankehitriny dia atolotra an-tsokosoko.
Ho valin'ny ahiahy amin'ny tsy fahafahan'ny sasany manatratra ny mpamatsy fisotroan-dronono dia nampahafantatra ireo orinasa fa, manakana ny iray izay manana olana amin'ny vavahady, dia miasa lavitra daholo ary misy fangatahana 6,000 voaray ary voaray.
Andriamatoa Governora Andriamatoa Martyn Roper nanao hoe:
Ny sidina mankany Honduras izay voamarina amin'ny Alatsinainy 4 Mey dia lany tanteraka. Fiaramanidina faharoa no miasa miaraka amin'ny antsipiriany andrasana rahampitso alarobia 29 aprily.
Andrasana ihany koa ny antsipiriany misimisy momba ny sidina mankany amin'ny Repoblika Dominikanina sy Costa Rica ary havoaka.
Ny sidina BA tonga anio androany dia hitondra ireo teratany caymanianina sy mponina maharitra ary mpiambina mpiambina 12 UK, izay samy hiatrika quarantine mandatory 14 andro any amin'ny tranom-panjakana.
Ankoatr'izay, ekipa iray mankany amin'ireo Tiorka sy Caicos izay tonga anio, dia hitoka-monina mitokana miaraka amin'ireo ekipa BA mandra-pahatongan'ny sidina anio rahampitso.
Ny tsaho milaza fa ny sidina BA tonga dia nahemotra hampidina olona niverina tany amin'ny Nosy Cayman taorian'ny nanandramana ny COVID-19 dia tsy mitombina. Ny olana ara-teknika iray dia nanemotra ny sidina nandritra ny 45 minitra alohan'ny niaingany ho an'ny Nosy Cayman androany androany avy any Londres.
IZY NY Governora dia nampitandrina fa ny fanaparitahana vaovao tsy marina amin'ny tsaho dia “tena ratsy” ho an'ny rehetra amin'ireo Nosy.
Nanomboka ny 5 martsa dia olona 408 no niainga tamin'ny alàlan'ny sidina BA iray, sidina roa Miami ary sidina Canada iray. Amin'ity herinandro ity 334 dia hiala amin'ny sidina BA iray, sidina roa mankany Miami ary sidina iray mankany Cancun, Mexico.
Ny sidina nofoanana ho any Nikaragua dia resahina amin'ny tompon'andraikitra ao amin'io firenena io amin'ny fikasana hikarakara sidina hafa ary koa sidina mankany Kolombia.
Ny governora dia nanao antsoantso ho an'ny mpiasan'ny Fahefana Avotra sivily noho ny fanampiany amin'ireo sidina ireo.
Ny fitsapana ny Nosy Cayman dia matanjaka tokoa, miaraka amin'ireo mpiasa manao fitsirihana mendrika kudos.
Minisitry ny fahasalamana Dwayne Seymour nanao hoe:
Ny fivoriana vao haingana teo amin'ireo mpitsabo amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina izay miatrika ny valin'ny krizy COVID-19 dia nanasongadina ny kalitaon'ny fikarakarana avo lenta atolotra ao amin'ny Nosy Cayman.
Ireo izay mitady fikarakarana maika dia tokony hitsidika ny toeram-pitsaboana goavambe HSA izay misokatra ny alatsinainy hatramin'ny asabotsy. Ny vonjy taitra tena izy no tokony handeha any amin'ny vondrona A&E. Ho an'ny soritr'aretina gripa rehetra, ny olona dia tokony hifandray amin'ny laharan'ny gripa. Ireo olona mila mandeha hopitaly dia avela hitondra fiara mankany amin'ny hopitaly.
Ny Minisitra dia nanao antsoantso ho an'ireo rehetra tonga tany amin'ireo nosy, ary nisy fiatraikany tsara tamin'ny fampandehanana ny Nosy Cayman, ary koa ny Tilly's Restaurant tamin'ny fanomezana sakafo ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana.
Avy amin'ny Komisioneran'ny Polisy:
Manomboka isan'andro amin'ny 7 hariva ny tsy fahazoana mivezivezy ary mitohy hatramin'ny 5 maraina. Ny rehetra, afa-tsy ireo mpiasa tena ilaina dia tokony hiasa mafy mandritra ny ora vitsivitsy. Amin'ny alahady dia mandritra ny 24 ora ny fihidiana.
Ny protokolola rehetra mandritra ny curfew malefaka dia tokony hampiharina ihany koa mba tsy hiatrika sazy. Midika izany fa ny mpiasa tsy tena ilaina dia mety handao ny trano fotsiny mba hanao asa tena ilaina ankatoavina ao amin'ny Fitsipika momba ny fahasalamam-bahoaka.
Tsy voafetra ny morontsiraka rehetra.
Tamin'ny valim-panadinana farany 187 voaray, 3 no nanaporofo tsara. Ny lafy tsarany dia manana tantaram-pitetezam-paritany, nifandray tamina zavatra tsara teo aloha ary iray no raisina ho fifindrana eo an-toerana.
Ny fanalefahana ny famerana dia hatao amin'ny dingana miaraka amin'ny tapa-bolana eo anelanelan'ny dingana tsirairay ary mandritra izany ny fitiliana dia hitohy amin'ny fomba henjana mba hahazoana antoka fa tsy voafehy ny dingana ankehitriny ary afaka manomboka ny dingana manaraka.
Ny dingana voalohany dia kasaina hanomboka amin'ny Alatsinainy 4 Mey 2020 raha ny valin'ny fitsapana tamin'ity herinandro ity dia mamporisika ampy hamela izany hitranga. Ny dingana voalohany dia antenaina mamela ny fandefasana kerbside entana maro hafa.
Ny dingana faharoa amin'ny fanokafana dia kasaina hatao ny alatsinainy 18 mey ary ho tafiditra ao ny fanokafana ireo sehatra toa ny fanamboarana. Ny andinindininy ho an'ny rehetra dia mbola eo am-pandinihana.
Belize: Fanavaozana ny fizahan-tany COVID-19 ofisialy